२९ बैशाख । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति घोषित भएका छन् । अमेरिकी पत्रिका ‘फोर्ब्स’ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचि अनुसार सी शक्तिशाली व्यक्तिहरुको पहिलो नम्बरमा आएका हुन् । यसअघि ४ पटक पहिलो स्थानमा रहेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने यसपटक दोस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति...
क्यालिफोर्निया, २७ वैशाख । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको चाहना, गोपनीयता तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सक्रियता बढाएको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको डाटा चोरी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले फेसबुकलाई अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न कदम उठाएका छन् । यसअतिरिक्त...
पुरुष महिलाको बक्षस्थलप्रति सँधै चनाखो हुन्छन् । पुरुष मात्र होइन महिलालाई पनि आफ्नो बक्षस्थलबारे सँधै चिन्ता र चासो हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैलाई चासो हुने महिला अंग हो बक्षस्थल । धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ बक्षस्थल कति किसिमको हुन्छ । धेरैलाई जिज्ञासा पनि होलान् महिलाको आकार स्तनको किन फरक फरक हुन्छ । कति को त प्रश्न पनि होला किन...
८ बैशाख , हेटौडा । सामान्य त हाई आउँदा हामी निन्द्रा नपुगेको वा अल्छि लागेको भनेर बुझ्ने गर्छौँ ।तर अनुसन्धानकर्ताहरुले कतिपय अवस्थामा हाई आउनुले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको संकेत गर्ने समेत बताएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘हाई आउनुको सम्वन्ध मस्तिस्क, मुटु फोक्सोमा हुने समस्या सहित अन्य विभिन्न रोगको संकेत पनि हुनसक्छ ।’ आखिर के कारणले...
तपाई हामी सपना देखेमा यस्तो हुन्छ भनेर अड्कल गर्ने गर्दछौं । सपनाको कुनै न कुनै अर्थ हुन्छ भन्नेमा हामी सबैजसो विश्वास गर्दछौं । सपनाकै आधारमा कुनै काम आज गर्ने वा नगर्ने जस्ता कुरा र कतै शुभ वा अशुभ भयो भन्ने पनि हामीलाई लाग्ने गर्दछ । हामीले देख्ने केही सपना र तिनका सांकेतिक अर्थ तल प्रस्तुत गरिएको छ । १. चश्मा लगाएको देखेमा -----------------...
बक्षस्थलको मोह : ४७ वर्षीया एलिग्रा कोलको बक्षस्थल ५४ इन्चको छ । वक्ष स्थल ठूला भएकै कारण उनलाई जुत्ता लगाउन सहयोगीको आवश्यकता पर्छ । पियानोकी शिक्षिका कोल आफ्नो करिअर परिवर्तन गर्दै मोडलिङमा लागिन् । चिकित्सकहरूले वार्षिक १ लाख डलर कमाउने कोललाई कृत्रिम ढंगले बक्षस्थल नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । हातको कमाल : अस्ट्रेलियाकी डेब...
गर्भावस्थामा सेक्स गर्नु सुरक्षित छ त ?
गर्भावस्थामा अधिकांश महिला यौन जीवनबाट टाढा रहन रुचाउँछन्। यद्यपि नौ महिना नै सहबासबाट टाढा रहनु उचित होइन। केही कुरामा सतर्कता अपनाए गर्भावस्थामा पनि यौन सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। गर्भावस्थामा सेक्स ग्राफ गर्भधारण भएपछि महिलाहरूमा संभोगप्रति त्यति रुचि हुँदैन। यद्यपि केही महिलालाई भने तीव्र इच्छा हुनसक्छ। विशेष गरी सुरुको समयमा...
ब्रिटिस मेडिकल जर्नलका अनुसार माइलोमा नामक ‘उपचारै नहुने’ रक्त क्यान्सर भएकी जागिरबाट निवृत्त बेलायती महिला डाइनेके फर्गसनले केमोथेरापीले काम नगरेपछि तरकारीमा प्रयोग हुने बेसारको ‘कुर्कुमिन’ प्रयोग गरिन् । कुर्कुमिन बेसारमा पाइने चम्किलो र पहेंलो रसायन हो । आफूलाई लागेको माइलोमा रोगसँग लड्न ६७ वर्षीया उनले पाँच वर्षसम्म...
केही विषयलाई विश्वव्यापी सत्यका रूपमा लिइन्छ। मान्छेका भाषा फरक छन्। उनीहरूले खाने परिकार फरक छन्। व्यवहार फरक छन्। यो फरकबीच पनि सत्यचाहिँ के हो भने संसारभर करोडौंले ‘पोर्न मुभी’ हेर्छन्। मान्छेलाई मनोरञ्जन (आनन्द) दिने यही पोर्नलाई समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमुख कारकका रूपमा पनि लिइन्छ। इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध हुने...